Sirta Ka Danbaysa Xogaha Turkidu u Gudbiyeen Warbaahinta ee Dilka Wariye Khashuuji | SAHAN ONLINE
Siyaabo kala gaddisan ayay uga hadleen saxaafadda caalamku sirta ka danbaysa in Turkidu hadba qayb qayb u soo dusiyaan wararka la xiriira baaritaanka dilka Wariye Khashuuji ee 2-dii bishan Aktoobar gudaha Qunsiliyadda Sucuudiga ugu wardanbaysay isagoo galaya, balse weli aysan soo saarin Turkigu war dhammaystiran oo la xiriira baaritaanka dilka la sheegay ee Suxufi Khashuuji.
Turkigu iyagoo ka faa’iidaysanaya saddex quwadood oo baaritaanka kiiska Khashouji dhinac kagala jira ( 1.Saxaafadda Maraykanka oo awalba Trump ku cabbaysnayd, 2.Senatooro miisaan ku leh siyaasadda Xisbiga Jamhuuriga sida Garam Haam iyo Maarko Ruubiyo oo si adag Trump dabada uga riixiya kuna yiri : “Misdaaqiyadda Maraykanka waa kawayn tahay mid xoogaa shilimaad ah la kala siisto” iyo 3.Dilka suxufiga oo baaritaanada hordhacaa muujin in ay si waxshinamo ah u dhacday, lanana xiriirinayo MBS) , ayay rabaan Turkidu in ay ku sii hayaan soo dusinta wararka kiiska Khashuuji iyagoo qayb qayb ah, oo qayba qaybta ka danbaysa ka sii xuntahay illaa ay ku dul istaagaan in ay ra’yul caamka caalamka ka gadaan in Maxamed Bin Salmaan yahay hoggaamiye aan istaahilin in uu fagaarayaasha caalamka hor yimaado amase uu noqdo haggaamiyaha Boqortooyada.
Turkigu waxa ay u haystaan MBS in uu ka masuul ahaa hagardaamooyin badan oo dowlada Turkiga loo maleegay sida inqilaabkii dhicisoobay iyo khalkhalkii galay lacagta Turkiga isagoo la saftay quwado kale oo arimahaas dabada ka riixayay oo Maraykanku kow ka ahaa, sidaas awgeed Ordagaan diyaar uma aha in uu heshiis hoose ka galo wax ka yar oo aan ahayn in MBS qaato mas’uuliyadda khashuuji, isla markaana aqbalo in uusan dhaxal suge istaahilin.
Inkastoo ay jiraan warar durbaba soo shaac baxaya in MBS laga wareeejiyo dhaxal sugaha Sucuudiga, laguna badelo walaalkiis Khaalid ( Safiirka Washitoon) ama Adeerkood Axmed Bin Abdicasiis ama Maxamed Bin Naa’if, haddana Bin Salmaan waxa uu si adag dhidibada ugu aasay in uu yahay dhaxal sugaha iyo hoggaamiyaha hadda ee Boqortooyada si aan gorgortan ku jirin, cid kalena aysan gudo iyo bannaan toonana shaki galin karin xukunkiisa.
Maalmaha soo socda laba mid uun ayaa fagaaraha caalamka u hari doona baaritaanka waayitaanka khashuuji.
1. Dilka Khashouji oo Turkidu ka dhigaan mid ay ku adkaato in uu ka baxo wararka caalamka ugu waawayn illaa hadba ay keenaan warar la xiriira sidii Khashuuji ku dhintay oo qaarkood laga yaabo in ay noqdaan kuwo argagax gasha caalamka, sidaasna MBS iskaga talfo, si fududna loo keeno ciddii noqon lahayd dhaxal sugaha boqortooyada.
2. In aragtida Trump/ MBS ay miro dhaliso oo la helo ciddii mas’uuliyadda dilkan qoorta loo suri lahaa gudaha Sacuudiga lana yiraahdo waxay u tasarufeen si ka baxsan sidii loo amray oo ahayd in ay soo qabtaan Suxufiga, balse ay iskood iskaga tasarufeen. Durba waxaa la shaaciyay in bahaldilihii dilka Khashuuji uu shil gaari ku dhintay ama madaxii hore ee afhayeenkii Taxaalufka Sacuudi/ Imaaraat Al-Casiiri baxshay amarka khaldan ee dilka Khashouji.
Waxaan sugnaaba waa baaritaanka gaaray kaymaha Turkiga in laga raadsho Maydka Khashuuji iyo heshiisyada caano dibi kalisidda Trump ee ku aadan boqortooyada.
W/Q Maxamed Cabdullaahi